लोडिस्ट घर भित्र गए - एउटा चिन्ह
लोडिस्टहरू कीराहरूको कोटीमा समावेश छन्, जसले धेरै मानिसहरूमा डराउँछन्। धेरै वर्षको लागि लोट्टेको भेडाहरू आपदाको प्रतीक हो, किनकि तिनीहरूले मिनेटको कुरामा फसलहरु संग खेतहरू नष्ट गर्न सक्छन्, जसले भोकाउन सक्छ।
साईन-ट्रस्टहरू घरभित्र गए
यस भयानक भित्तामा टिप्पणीहरू मोशाको बाइबलीय कथामा पनि देख्न सकिन्छ, त्यसैले तसर्थ सधैं संकट र समस्याहरूको हर्बिंगलाई मानिन्छ। यद्यपि यो खतरनाक कीट देवताहरूको क्रोधको चिन्ह र पश्चात्तापको एक संकेत मानिन्छ। पुरातन चीनमा घरको डाँडाहरूको चिन्ह आशीर्वादको प्रतीक हो, तर कीराहरूको भेडाहरूले काल्पनिक विरूपणको चिन्ह हो। अझै पनि यी कीराहरू दुश्मन र झूटा अगमवक्ताहरूको आक्रमणको प्रतीक हुन्छ। त्यहाँ बस्नुको चिन्हको अन्य व्याख्याहरू छन्, यसको अनुसार यो भूख, wilting, बुद्धि र कमजोरीको चिन्ह हो।
मध्य पूर्वी मिथकों मा रत्न चंद्र देवी को एक विशेषता हो।
डाँडाहरूले कस्तो सपना देखाउँछन्?
यो पनि दिलचस्प रहन को लागी केवल न केवल लक्षण को लागी संकेत को संकेत को समझने को लागि, तर यो भित्री जहां कहाँ देखि प्रकट हुन्छ सपनाहरु मा। अधिकांश अवस्थामा, यस्तो सपनाले चेतावनीको रूपमा कार्य गर्दछ कि जीवनमा एक व्यक्ति हुन सक्छ जसले जीवनबाट धेरै प्राप्त गर्न आफ्नै सपनाको लागि सपना देखाउनेछ। महिलाहरु को लागि यस्तो कहानी एक पंखा को बेपत्ता को संकेत हो। सब्जियों मा डाँडा को देखने को मतलब छ कि केहि केहि नींद को हितों लाई नोकसान गर्न सक्छ। सपना, माछाहरु को धेरै संख्या मा प्रकट हुन्छ, को मतलब चाँडै तपाईं अपमानजनक मान्छे संग सम्झौता गर्न असुविधा अनुभव गर्नेछन्। यदि तपाईं लोट्टेहरूलाई मार्न व्यवस्थित गर्नुभयो भने, यो एक व्यक्ति संग एक फ्रान्क कुराकानीको लागि तयारीको लायक छ जुन लामो समय सम्म अप्रिय भावनाहरु उत्पन्न भयो। एक कमजोरीको रात्रि दर्शन एक फसल विफलताको हानिकारक हुन सक्छ। व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूको लागि, यस्तो कथा भनेको आर्थिक समस्या हो।
पक्षीको पंख फेला पार्नुहोस् - एउटा चिन्ह
पत्रुस र पावलको पर्व - संकेत
सही गाई खरिदले के गर्छ?
तपाईं किन छलांगमा स्नान गर्न नसक्नु हुन्छ?
सुई को लागी हेर्दै हुनुहुन्छ?
किन पहिला एक सपना मनपर्छ?
बट - संकेतहरू
40 दिनअघि मृतकको आत्मा कहाँ छ?
Zamiokulkas - पात प्रचार
स्तन ग्रंथि को Fibroadenoma - हटाउन या नहीं?
कोठरीमा तहको बेड
फेशनको सर्फफन 2014
पनीर संग पनीर पनीर कोसेरोल
शैली शैलीमा विवाह
बिना हातमा सोफे
पनीर संग ओवन मा कोर्गेट
नयाँ वर्ष 2017 को लागि कपाल पसल
भिटामिन सी को ओवरडोज
घाँस धुने कसरी?
गाजर का रस - राम्रो र खराब
आमाबाबुको जिम्मेवारी छोराछोरी बढाउनको लागि
प्यान्रेराहरू दुख्छ - कुन औषधि लिन सकिन्छ?
केट हडसनले कसरी लडाइरहेको छ ... मुँहासे?
अनुहारको लागि एक ब्रोंजर कसरी लागू गर्ने?
KFC मा कसरी पङ्क्तिहरू पकाउने?
पैनकेक: कसरी छनौट गर्ने हो?